Home News Dowladaha Britain iyo Germany oo Dowladda Kenya ka caawinaya la dagaalanka Ururka...
Dowladaha Britain iyo Germany oo Dowladda Kenya ka caawinaya la dagaalanka Ururka Al Shabaab
Dowladaha Britain iyo Germany ayaa balan qaaday in ay Dowladda Kenya ka taageerayaan la dagaalanka Argagixisadda, sida uu baahiyay the standard media.
Safiirka Germany u fadhiya Kenya Annett Gunther ayaa sheegtay in Dowlad ay ku dhawaad 200 Million oo shilinka Kenya ah ku bixineeyso Dagaalka ka socda Soomaaliya ee lagula jiro Al-shabaab, gaar ahaan tababarka la siinayo Ciidanka Kenya .
“Waxaan ku bixin doonaa 200 million oo shilin in aan ku taageerno ka hortagga waxyaabaha qarxa ee Soomaaliya iyo in Ciidanka Kenya ay si hagaagsan Naftooda u badbaadiyaan” ayay tiri Annett Gunther .
Wakiilka sare ee Britain u fadhiya Kenya ayaa sheegay in ay ingiriisku taareerayo Ciidanka Kenya ee Jooga Soomaaliya si looga guuleysto Al-shabaab oo Dagaalkoodu uu gaaray gobollo ka mid ah Kenya.
Dowladda Kenya ayaa Al-shabaab kula dagaalameysa gudaha Soomaaliya, Ciidankeeduna waxay ka mid yihiin Howlgalka midowga Africa ee Soomaaliya.
Wixii ka Dambeeyay markii Ciidanka Kenya ay Soomaaliya soo galeen 2011kii Al-shabaab waxay kordhiyeen beegsiga Ciidanka Kenya iyo shacabka u badan Dadka aan muslimiinta ahayn.
Previous articleMaamulka Hirshabeelle oo si kulul uga hadlay weerarkii dhabagalka ahaa ee Ururka Al Shabaab ku beegsadeen Ciidamada Dowladda
Next articleWasiir Beyle: Soomaaliya waa Mashruuc ee aan wax ka dhaco!!
Taliska Booliska oo shaaciyay hub iyo Qaraxyo lasoo qabtay(Aqriso)